ဒါဟာအမှန်တကယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလား | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 3, 2019 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 3, 2019 Douglas Karr
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လွန်ခဲ့သောလကထက်ယခုလ ၈၃% ပို၍ စကားပြောပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည် ပိုပြီးစေ့စပ်? ငါသူမ၏အကြောင်းကိုအနည်းငယ်မှတ်ချက်တွေလုပ်ပါလျှင်ကော? ငါစေ့စပ်ပြီးပြီလား
Merriam Webster ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
တစ် ဦး ကျော် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က, ငါပထမ ဦး ဆုံးငါစျေးဝယ်ဝေါဟာရကိုဖော်ပြရပ်တန့်စေလိုကြောင်းကြောင်း rant ထုတ်ဝေခဲ့သည် စေ့စပ်ထားခြင်း စီးပွားရေးမက်ထရစ်အဖြစ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာပြanနာရှိနေဆဲဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်။
စာမျက်နှာပေါ်တွင်တိုင်းတာရသောအချိန်၊ မှတ်ချက်အရေအတွက်, နောက်လိုက်အရေအတွက်ဆန္ဒမဲအရေအတွက်၊ မဲအရေအတွက် (သို့) ကြည့်ရှုသည့်မိနစ်အနည်းငယ်မျှပင်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသင်ညှိနိုင်ခြင်းမရှိပါကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ စေ့စပ်ထားခြင်း အမှန်တကယ်ရန် စီးပွားရေးရလဒ်။ သင်မဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်သာဖြစ်သည် အနတ္တမက်ထရစ်.
ငါအသုံးအနှုန်း၏အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်။ တိုင်ကြားနေဆဲ စေ့စပ်ထားခြင်း ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများစွာဟာစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်မပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုငွေအမြောက်အမြားဖြုန်းတီးနေတာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။
အဲဒါမဟုတ်ဘူး စေ့စပ်ထားခြင်း, ယင်း ချိန်းတွေ့။ နောက်ပြီးပရိသတ်တွေ၊ ပရိသတ်တွေ၊ ပရိသတ်တွေအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမျိုးကိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်စျေးကွက်သမားများကထိုအပြန်အလှန်အကျိုးကိုအမှန်တကယ်စီးပွားရေးရလဒ်များနှင့်အပြန်အလှန်ညှိရမည်။
ချိန်းတွေ့ခြင်းဆိုသည်မှာလူနှစ် ဦး ၏တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်သင့်လျော်မှုရှိမရှိအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သောလူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။
သင်၏ visitors ည့်သည်များသည်သင်၏ site ပေါ်တွင်အချိန်ပိုကုန်လျှင်၊ သင်ပိုမိုချိန်းတွေ့သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမဟုတ်ပါ။ သင်၏ visit ည့်သည်သည်လက်စွပ်ကို ၀ ယ်ပြီးသင့်လက်ချောင်းပေါ်တွင်ထည့်လိုက်သည်နှင့်သင်အလုပ်ရှုပ်သည်ဟုပြောပါ။ ထို visitors ည့်သည်အရေအတွက်တိုးများလာပြီးသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှပိုမို ၀ ယ်သည်ဆိုပါကသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်တိုးနေသည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။
မရနိုင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး လူမှုမီဒီယာနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာတိုင်းတာ သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးနေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ဖောက်သည်တွေကို wow လုပ်ဖို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုသုံးပါ။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်က eMarketing အသင်းညီလာခံ၌ဂျက်ဖရီဂလူးခ်ကအဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောတဲ့အခါသူကကြီးစွာသောဇာတ်လမ်းကိုပြောပြခဲ့သည် Travelocity ဆိုရှယ်မီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်ခြင်း gnome နှင့် ငါ့နေရာ.
ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစံနှုန်းများအရစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် gnome နှင့်ရင်းနှီးပြီးမှတ်ချက်များနှင့်စကားပြောဆိုမှုများပျံသန်းသည်! လူများသည်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အချိန်ပိုကုန်ကြပြီးထိတွေ့မှုတစ်တန်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ထိုကင်ပိန်းသည်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ကုန်ကျပြီး Travelocity သို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမောင်းနှင်ရာတွင်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့် ... အဘယ်သူမျှမထိတွေ့ဆက်ဆံမှု။
PS: ဘေးထွက်မှတ်စုတခုမှာ…ငါမှာကောင်မလေးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကမဆက်ဆံဘူး။
PPS: ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရုပ်ရှင်ရုံ Ablog ဒီအံ့မခန်းဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဘို့! ဒါကငါတို့ရဲ့ဒုတိယဖြစ်တယ် ဒဏ္,ာရီများ၊ စီးရီး။
Sidecar: ဒေတာ - Driven အမေဇုံကြော်ငြာမဟာဗျူဟာများ
ဧပြီ 25, 2009 မှာ 8: 52 AM
ကောင်းမြတ်တော်မူပါဘုရား။ ဤစာစောင်၏ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်ရုံး၌ထိုင်ခုံမှလဲကျသွားသည်။ ရေရှည်တွင်အသွားအလာသည်အရေးမကြီးပါ။ ရောင်းအားသည်အရေအတွက်မည်မျှရှိသည်။ အခွန်။ အခွန်။ အခွန်။
ဧပြီ 25, 2009 မှာ 12: 51 pm တွင်
စတီဖင်ကိုဘုတ်ပေါ်ခေါ်လာသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ သူဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ပါ၊ သူနဲ့ခင်ဗျားပါ ၀ င်လာတာကိုကျွန်တော် ၀ မ်းသာပါတယ်။ သူဘယ်လိုတူးဆွသလဲ၊
Re: ။ သင်၏ဖောက်သည်များ၊ ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသည်ဟုထင်မှတ်ပြီးအချို့အရာများကိုတိုင်းတာရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ Blogging နှင့်လူမှုမီဒီယာကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊ ရိုးသားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားအထူးဂရုပြုစေခြင်းဖြစ်သည်။ အရင်တိုင်းတာရန်တိုင်းတာနိုင်သည်။
ငါကစျေးကွက်ရှာဖွေသူများကိုသူတို့၏ဖောက်သည်များအားမြင်နိုင်သောတည့်တည့်ဖြင့်ပေးစေခြင်းဖြင့်သူတို့ကို b၊bမှ c၊ c မှdသို့သက်သေပြနိုင်သည်။ ဖောက်သည်များက၎င်းကိုပွင့်လင်းရိုးသား။ ရရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိသောအခါသူတို့အတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။ ငါတို့သာအဲဒါကိုသက်သေပြရမယ်။
ဒီမှာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် သင် Bean ဖလားကိုဘယ်သွားမှာလဲ
ဧပြီ 25, 2009 မှာ 11: 44 AM
ငါတို့ကဒီမှာ semantic argument တွေလုပ်ဖို့ရှိမယ်။
A. ဒါဟာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုဆိုတာသင့်ရဲ့နှိုင်းယှဉ်ချက် (အနည်းဆုံး ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်) မှာအနည်းကိန်းဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပုံရသည်။ ငါညှိနှိုင်းမှု၏အခြားအဓိပ္ပာယ်စကားပြောဆိုမှုသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီ "ဆွဲသို့မဟုတ်ပါဝင်ပတ်သက်" ရန်ဖြစ်ပါသည်ကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မယ် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုဟာအနည်းကိန်း (သို့) ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီနှင့်ဖောက်သည်များအကြားပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးသို့အဆုံးအထိရောက်ရှိသွားသည်။ ဒါဟာသူတို့အကြားအကွာအဝေးကျုံ့နေသည်။
ခ။ သင်စာရင်းပြုစုထားသည့်“ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု” ဟူသောအသုံးအနှုန်းတစ်ခုချင်းစီကိုတိုင်းတာနိုင်ပြီးသူတို့ကိုကျွန်ုပ်လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုသံသယဝေမျှဘယ်မှာသည်ဤအသုံးအနှုနျးအသီးအသီးမိမိတို့အဘို့အလိုငှါတွက်ချက်သောအခါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကထင်မြင်ချက်တစ်ခုမှထွက်ခွာသွားသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းတို့သည် ၀ ယ်ယူခြင်းကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်နီးစပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ဆောင်မှုများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုလားသောနောက်ဆုံးရလဒ်ဆီသို့ ဦး တည်သင့်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဤ (မကြာခဏမဟုတ်သော linear) လမ်းကြောင်းကိုဖြည့်စွက်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Travelocity မအောင်မြင်သောနေရာတွင်သုံးစွဲသူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုချင်းစီသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမည်သို့ပြီးမြောက်စေမည်ကိုစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအသိအမြင်မြင့်မားသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်သည်။
C. ခင်ဗျားရဲ့ပုံသက်သေနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်ရင်ကုမ္ပဏီတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေဆီကနေရုန်းထွက်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားအဆက်မပြတ် ၀ တ်စားဆင်ယင်ခြင်း၊ ဆက်ဆံခြင်း၊ သူတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးအသစ်များတည်ဆောက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရမည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီတခုကသူတို့ဖောက်သည်များကိုအိမ်ထောင်ပြုရန်နောက်ဆုံးလမ်းဖောက်လိုက်ပြီလို့ထင်ရင်ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုကသူတို့ပုံရဲ့ဘယ်လောက်မြန်သလဲ။
ကြာမြင့်စွာပြောဆိုခဲ့သည့်မှတ်ချက်အတွက်တောင်းပန်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အရေးပါသောမက်ထရစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပိုမိုထိရောက်စွာတည်ဆောက်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ အမြင်တစ်မျိုး။
ဧပြီ 25, 2009 မှာ 12: 37 pm တွင်
အလွန်ကောင်းသောတုံ့ပြန်ချက်နှင့်ကောင်းသောစကားပြောဆိုမှု။ ခင်ဗျားရဲ့အကြံပေးချက်အရဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာငွေကြေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကို ဦး တည်စေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုငါစိန်ခေါ်လိမ့်မယ်။ လူတွေကိုသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ၀ ယ်ရန်အဓိကနည်းလမ်းများကသင်၏ဘလော့ဂ်တွင်မှတ်ချက်ပေးခြင်းဖြင့်အစပြုကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုပြသသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏အရောင်းပြသမှုကိုပြပါ။ သို့မဟုတ်သင်၌ရှိသောနောက်လိုက်များနှင့်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်တစ်ခုလုံးအကြားဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
ငါထင်တာကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အတုအယောင်စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီလို့လူတွေကယုံကြည်နေတာကြောင့်ပဲ။ စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ငါဟာဒီအရာတွေနဲ့အမှန်တကယ်ဝယ်ယူမှုကြားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသတဲ့အထောက်အထားများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးရမယ်။ ယနေ့အထိငါ bs လို့ထင်တယ်
မိုက်ကယ် Ray Hopkin
ဧပြီ 25, 2009 မှာ 7: 45 pm တွင်
Doug, ဤသည်အလွန်နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်, ငါ 'ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု' 'အလွန်အမင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဟောင်းနွမ်းသည်ကိုငါသဘောတူသည်။ နောက်ဆုံး၌စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမောင်းနှင်သည့်အရာနှင့်လူများအားသင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သူတို့၏ငွေများကိုစွန့်လွှတ်ရန်အလေးအနက်ထားခြင်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ -Michael